INkomfa eNgcono yabasebenzi ebalaseleyo ka-2019 | Hongli
Ngowama-2020/6/15, inkampani yethu ibambe iNkomfa eNqabileyo yaBasebenzi kwi-2019. Ngexesha lenkomfa, okokuqala, umphathi wethu Mnu. Umthamo wentengiso yomatshini otyibilikayo unyukile kwaye ubuchule bokusebenzisa umatshini wokuhambisa izixhobo ngobuchule bunobuchule ngakumbi. Kunyaka ophelileyo, inkampani yethu yenze ukupasa ngempumelelo kwaye kulo nyaka sijongana nemiceli mngeni. Ngexesha lesiqingatha sokuqala sonyaka, inkampani yethu yenze inkqubo yomatshini wokucoca i-Melt-blown kwaye yafumana impumelelo esemagqabini. Kodwa kusafuneka sibuqonde ubungozi benkqubo size emva koko senze ukukhuthaza.
Okwangoku, abaphathi beworkshop ezintathu benza intetho malunga nesicwangciso somsebenzi sendibano nganye.
Ke, umphathi wethu uncome abasebenzi ababalaseleyo kunyaka ophelileyo. Umntu ngamnye unesiqinisekiso sembeko. Esi satifiketi sikwabonisa iinzame abazenzileyo kunyaka ophelileyo.
Ewe, eyona projekthi ibaluleke kakhulu kule nkomfa kukuba iziko lethu lobugcisa liseke. Oko kuthetha ukuba itekhnoloji yenkampani yethu yenze ukukhuthaza okukhulu. Ngoncedo lweziko lobuchwephesha, amandla enkampani yethu yokunyuka okuzimeleyo kwendalo. Kwaye imveliso yethu iya kuba nozinzo ngakumbi kwaye ibhetyebhetye ngakumbi.
Okokugqibela, inkampani yethu incoma abasebenzi ababalaseleyo benkqubo yokufakelwa kwamachiza eMelt. Abasebenzi bethu benze imizamo ebalaseleyo ngeli xesha lale nkqubo. Umzekelo, xa sithengise umatshini, umphathi weziko lobugcisa kunye nabanye abasebenzi abaliqela baya kuya kwinkampani yomthengi ukuze bancede ukufaka nokuba kunini. Ngomzamo wabo, umthengi ukhetha umatshini wethu.